Tranolain'i Teepee ho an'ny ankizy "Voninkazo maniry" - Moi Mili
Home > Tranolain'i Teepee ho an'ny ankizy "Voninkazo maro"
Tranolain'i Teepee ho an'ny ankizy "Voninkazo maro"
Teepee "Voninkazo maniry" dia tsy dia misy dikany amin'ny lokon'ny dongolobe, fa ambonin'izany rehetra izany dia ny teepee voalohany miaraka amin'ny modely floral amin'ny lamba. Ao anatin'ny tampon'ilay tipi dia misy kitapo izay ahafahan'ny zanakay manafina kilalao, boky na harena hafa. Noho ny fotsifotsy fotsy volo dia mety ho tafiditra ao anatiny ny teepee.
Ny teepee dia vita amin'ny akora voajanahary: 100% lamba rongony sy hazo kesika. Noho ny fanamboarana rindrina dimy, dia miorina tsara ny tranolay rehefa sokafana, vita ny hazo, apetraka ao anaty tonelina natao tamin'ny vodiny. Teepee dia ho lehibe ao an-trano, na zaridaina na tora-pasika.
Farany, ny zanatsika dia ho afaka hanana ny tontolon'izy ireo manokana, sehatra kely hanatanterahana lalao isan-karazany. Ny varavarankely iray misy varavarana lamba dia manintona. Rehefa avy milalao dia apetraho eo amin'ny fonony ny tranolay ary apetraho eo amin'ny zoro ao amin'ny efitrano. Aforeto, kely ny habeny, ary misaotra ny sarony dia afaka mora foana maka ny tranolay ianao any ivelany.
Ahitana lay lay ho an'ny ankizy, kitay ary sarona landihazo. Mampirisika anao izahay hameno izany amin'ny haingo tsara tarehy sy ny kojakoja Indiana.
Lamba: 100% Cana misy fanamarinana OEKO-TEX®. 160 lanja.
Hazo kesika: 180 cm.
Haavolana aorian'ny sakany: 170 cm.
Diameter'ny: 120 / 130 cm.
Manana ny marika CE ny zanatsika.
Ny vokatra Moimili dia fanao tany am-boalohany novolavolainay, izay toetra mampiavaka ny herin'ny maivana sy ny kalitao avo indrindra. Samy noforonina tany Polonina avokoa izy ireo. Ny vokatra hafa mitovy habe amin'ny Internet matetika dia tsy mahafeno ny fepetra momba ny kalitao.
Default Title - PLN 439.00 PLN